SBS Language | Madaxbanaani, Heshiis, Aqoonsi: Maxay 26 Janaayo ugu tahay taariiq dhib badan dadka dalkan loogu yimid?
Madaxbanaani, Heshiis, Aqoonsi: Maxay 26 Janaayo ugu tahay taariiq dhib badan dadka dalkan loogu yimid?
Sanad walba 26 Janaayo Australia waxaa laga xusaa bilowgii gumaysiga Britan ee 1788. In loo bixiyay bilowgii gumaysiga Britan "Australia Day" waa arin lagu muransan yahay. Dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islander-ka, Janaayo 26 waxay uga cabanayeen laga soo bilaabo 1938 inay tahay "Day of Mourning" ama maalin murugo, dhawaana waxay qaar badan ku tilmaamaan "Invasion Day" ama maalintii dalkooda lagu soo duulay iyo "Survival Day".
Siyaalaha kala duwa ee shaqsiyaadka iyo kooxahu ay ku tilmaamaan Janaayo 26, waxaa gundhig u ah fikrada madax banaani, oo macneheedu yahay in dadka dalka loogu yimid ay asaliyan leeyihiin talada iyo maamulida dhulkooda, waxbarashada, sharuucda, siyaasadaha, caafimaadka iyo wixii la mid ah.
Waxaa aad la isla ogol yahay fikrada madax banaanida ay gundhig tahay dooda xaquuqda dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islander-ka. Hase yeeshee kooxaha kala duwan ee dadka dalka loogu yimid ayaa ku kala duwan sida madax banaanidaas loo aqoonsanayo.
Tan ayaa ah bilowga doodda Australia ee aqoonsiga, heshiiska, codka iyo xaqiiqda. Aragtiyadaas kala duwan ayaa keenay qaabab kala duwan oo looga hadlayo aqoonsiga dadka dalka loogu yimid ee dalkan Australia.
Mid ka mid ah hindisiyaasha qaabka aqoonsiga ayaa ah in wax laga badalo dastuurka Australia si loogu aqoonsado dadka dalka loogu yimid. Howlaha dastuurka badalka ee 2020 ayaa waxaa ka danbeeyay liis dheer oo gudiyo qabiiro ah, baaritaano Senat, gudi dastuur iyo golaha aftida, warbixino iyo talooyin la soo jeedinayay laga soo bilaabo 1980 meeyadii.
id ka mid ah moodelada ugu caansan oo hor kacaya wadahadalka aqoonsiga ayaa ah ‘The Uluru Statement from the Heart’, oo lagu tilmaamay wixii ka soo baxay wadahadal 13 maalmood oo lagu qabtay dalkoo dhan ayna ka qayb qaateen wakiilo ka socda bulshooyinka Aboriginalka iyo Torres Strait Islander-ka.
Dean Parkin, madaxa the Heart, ololaha wacyi galinta dadweynaha ee Uluru Statement, ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan sidii taageero loogu heli lahaa cod ay ku yeeshaan baarlamaanka.
"Waxaan taageero buuxda u haysanaa the Uluru Statement. marka waxaa ajandaha qayb ka ah cod, heshiis iyo run sheegid. fikrad ah inay cod ku yeeshaan baarlamaanka oo wakiil ka ah shacabka Aboriginalka iyo Torres Strait Islader-ka oo barlamaanka la hadli kara, la hadli kara dimoqraadiyada Australia kuna difaacaya dastuurka Australia.
Ujeedada laga leeyahay in dastuurka Australia lagu aqoonsado dadka dalka loogu yimid in waa in la siiyo 'cod' awood u siinaya inay saamayn yeeshaan ayna go'aan ka gaari karaan arimaha quseeya bulshadooda.
Laakiin dadka qaar ayaa aaminsan in 'cod' lagu heli karo in la abuuro koox matasha oo noqda 'cod ay dawlada' ku yeeshaan oo badal u ah 'cod ay baarlamaanka' ku yeeshaan, sida uu soo jeediyay wasiirka arimaha dadka dalka loogu yimid, Ken Wyatt.
“Xaqiiqdu waxay tahay waa heli kartaa cod baarlamaan, laakiin cod aad ku yeelato dawlada oo ah hadba xisbiga ugu wayna waa dawlada maalintaas, ayaga ayaa dhaqaalaha gacanta ku haya, iyaga ayaan siyaasada gooya, iyaga ayaa sharuucda baarlamaanka hor geeya.
“Marka cida aad rabto inaad saamayn ky yeelato waa dawlada. cod baarlamaanka laga lagu yeesho wuxuu ku yimaadaa cod aad dawlada ku yeelato," ayuu yiri Mr Wyatt.
Laakiin Dani Larkin oo ah haween ka soo jeeda Bundjalung iyo Kungarakan, hindisaha Mr Wyatt ee ah in koox matasha shacabka sharci lagu sameeyo halkii dastuurka lagu qori lahaa ay tahay natiijo nasiib daro ah lagana xumaado.
"Waxaa taageero wayn loo hayaa in la sameeyo cod baarlamaanka ah oo afti dastuur loo qaado si looga difaaco in la tuuro oo markii la rabo qalin lagu badali karo. Waxayna nasiib daro iyo wax laga xumaado ku tahay dadkii shaqada dheer soo qabtay gaar ahaan duqaydii," ayay tiri.
Fikrad kale oo aad looga doodo waa 'Heshiis' oo ah heshiis rasmi ah oo dhex mara dawlada iyo dadka dalka loogu yimid, oo lagu aqoonsanayo jirintaankii shacabka Aboriginalka iyo Torres Strait -ka Islanders-ka ka hor intii uusan Britan qabsan dalka iyo dhacii dhulka ee lagula kacay shacabka dalka loogu yimid. Dad badan ayuu heshiis qaran ama mid goboladu la galaan shacabka dalka loogu yimid 'cod baarlamaan' badalkiisa ay noqoto ujeedada koowaad maadaama macneheedu yahay aqoonsi madax banaani iyo bilowga dib u heshiin iyo run sheeg, si la mid ah tan loo sameeyay bulshooyinka indijiniiska ah ee NZ, Maraykanka iyo Canada.
Waana sababtaas tay kooxo Indigenous Australian ah ay uga baxaan shirkii madexeedkii Uluru 2017, oo ay ku jiraan Lidia Thorpe oo ka tirsan beesha Gunnai iyo Gunditjmara oo ka mid ah ahayd waftigii Victoria , haddana ah Senatarad ka tirsan xisbiga Greenka ee baarlamaanka Victoria.
Waxay aaminsan tahay in wali loo baahan yahay in la qabto wadahadal loo dhan yahay oo qabiilkasta ku jiro.
"Xaq ayay u leeyihiin inay go'aan ka gaaraan waxay doonayaan iyo waxay u baahan yihiin. Waxay ila tahay in loo baahan yahay in la hubiyo in dadka la yeesho wadahadal ixtiraam leh, dhamaan dadkana miiska soo fariistaan ee aan qaar gaar ah lagu casuumin, dibadana loo saariin dadka asalka ah," ayay tiri Ms Thorpe.
Marka laga hadlayo madax banaani, dadka asalka u ah dooda ayaa waqti dheer ka soo shaqaynayay siday u horumarin lahaayeen nolosha bulshooyinka Aboriginalka iyo Torres Strait Islander-ka.
Qaar ka mid ah kooxaha dhalinyarada ah ee bulshada Aboriginal iyo Torres Strait Islander-ka ayaa doorbidaya fikrada ah heshiis, waxayna diidan yihiin fikrda afti iyo in lagu aqoonsado dastuurka, maadaama ay uga dhigan tahay in la xaajoodaan maamulkii gumaysiga oo aysan waligoodba aqoonsanayn. Waxay qabaan in maamulka gumaysigu uu lidi ku yahay madax banaanida iyo xaqa ay asal ahaan u leeyihiin inay ayaahooda ka tashadaan.
Kooxahaas dhalinyarada ah ayaa baraha bulshada iyo internet-ka ka wada qaab siyaasadeedo cusub iyo abaabul, isku xir iyo dibad baxyo ay ku dalbanayaan isbadal.
Waxaa hormuud ka ah diidmada aqoonsi dastuur Warriors of the Aboriginal Resistance, oo sidoo kale loo yaqaan WAR.
Boe Spearim oo ka tirsan bulshada Gamilaraay, Kooma iyo Muruwari oo ka tirsan kooxda WAR ayaa waligiis ka soo horjeeday arintan.
“Waxaan u malaynayaa inay wadahadal bulshada lala yeeshay ahaa laakiin aan dariiq sax ah loo marin, mana ahayn wax bulshada Aboriginalku ay doonayeen ama rabeen. Heshiis ayaa ahaa waxa miiska noo saaran waligiisna qayb ka ahaa wadahadalka."
Mawqifka kooxda WAR waa inaysan la hadlin xukunka gumaysiga, laakiin Mr Boe ayaa fahansan in nuxurka ayaa ka talisku u ogolaanayo shacabka Aboriginalka iyo Torres Strait Iskander-ka inay g'aan ay leeyihiin qaataan.
Waxaa socda dood badan oo ku saabsan sida ay ekeenayso guushu haddii aqoonsi la helo.
Michael Mansell oo ka tirsan bulshada Palawa ee Tasmania ahna sharci yaqaan, ahna madaxa Aboriginal Land Council of Tasmania waxaa u yaala inuu kala doorto aqoonsi magac ah iyo mid waxtar ah.
"Aqoonsi iska magac ah wuxuu la mid yahay wixii dhacay 2007 markii Kevin Rudd uu raali galin siiya jiilkii la xaday (stolen generation)," ayaa yiri.
Mr Mansell ayaa faahfaahiyay sidii loo heli karo aqoonsi macne leh oo bulshada Aboriginalku helaan.
“Ma ah nidaam adag haddii heshiis la horgeeyo baarlamaanka. Baarlamaanka federalku ha sameeyaan hay'ad sumcad leh oo matasha shacabka Aboriginalku, haydaasna ay mudnaanta siiso qaybinta maalgalinta wax loogu qabanayo bulshooyinka Aboriginalka ah,"
"Tan labaad waxaan baarlamaanka federalku sharci ku sameeyo gudi heshiis ka shaqeeya, gudigaasna ay keenaan heshiis hordhac ah, waxaan qabaa in labaas ay si sax ah wax uga qaban karaan nolosha dadka Aboriginalka," ayuu yiri.
Dawlada federalka ayaa isugu keenay sadex gudi oo ka talo bixiya sidii loogu samayn lahaa 'cod' shacabka Aborginalka iyagoo la shaqaynayo madaxda heer gobol, mid federal iyo mid degmo.
Professor Tom Calma oo ka soo jeeda bulshada Kungarakan iyo Iwaidja waa la gudoomiayaha goox kala talisa dawlada sidii loo samayn lahaa cod ay yeeshaan bulshada Aborginalku.
Wuxuu sharaxayaa in doorkoodu yahay siday aragtiyada kala duwan ay ugu bandhigi lahaayeen dawlada federalka oo iyadu markaas go'aan ka gaaraysa qaabka 'codka' shacabku noqondoono.
"Waxaa samaysmay kooxo heshiis doonaya, laakiin anaga doorkeenu ma ah inaan eegno heshiisyo. Way cadahay waxaan doonayna cod baarlamka lagu yeesho".
Maadaama hadda warbixintii la soo dhameeyay, qorshaha dawlada federalka ayaa waxaa go'aan ka gaaraya golaha wasiirada, wada tashi samaynaya kadibna sharciyaynaya ka hor doorashada soo socota.
Kooxaha aan doonayn inay tanaasul ka sameeyaan qaabka ay taageerayaan sida professor Calma ayaa sheegay in shacabka Aboriginalka ay u baahan yihiin inay ka faa'iidaystaan fursadaha hor yaal.
"Waxay ila tahay in waxa nalaga rabo inaan fiirino halkan iyo haddadan la joogo. Maxaan noo qabsoomi kara? maxaa noo qabsoomi kara anaga oo aan ka tanaasulin sharafteena shacab ahaan haddaan nahay Aboriginal iyo Torres Strait islanders?
“RW ayaa taageeraya wasiirka arimaha dadka dalka loogu yimid oo doonaya inuu horumariyo codka shacabkaas ee dawlada iyo codka shacabka ee baarlamaanka. Marka waa inaan ka faa'iidaysano inta fursadani jirto."